China Eco Friendly Canvas Grocery Tote Bag Ukukhiqiza kanye nefektri | Eqondile
Izikhwama ze-Canvas zingahlukaniswa zibe yizinhlobo ezintathu ngokuya ngempahla, ukotini we-polyester, ukotini omsulwa, ne-polyester emsulwa; Izikhwama ze-canvas zihlukaniswe ngehlombe elilodwa, ihlombe eliphindwe kabili, nesikhwama esikhishwe ngendlela yangemuva. Isikhwama se-Canvas yisikhwama esidumile eminyakeni yamuva ngoba siqinile futhi sinomuzwa wokuzizwa ngemuva kokubona. Umkhuba wamanje wemfashini. Futhi kunezinhlobo ezahlukahlukene ngokwamaqembu ahlukene abantu. Kunezitayela zezintaba, zokuhamba nezokungcebeleka.
Imibala yezikhwama zendwangu nayo ihluke kakhulu. Kukhona umbala owodwa noma inhlanganisela yemibala. Ziyizikhwama ezifanayo ngokukhululeka. Ngezinto zokuklama eziningi zezikhwama zendwangu, isikhwama se-canvas sakhe imfashini yemfashini. Isikhwama se-Canvas yimfashini entsha yamanje yabantu. Izikhwama zokudla ze-Canvas ziyahlukahluka ngokuyisisekelo futhi zingafanisa noma yiziphi izingubo. Isikhwama se-Monotone canvas siyinto ejwayeleke kakhulu, yize sisebenza kakhulu, kepha ngikholwa ukuthi kwesinye isikhathi uzizwa unesithukuthezi, lapho-ke ungahle ukhethe isikhwama semibala esikhanyayo semibala yokuthenga.
Isikhwama se-canvas siqinile futhi siqinile, ngokuhambisana nemfashini yabathandi bokuhamba. Isikhwama sendwangu senziwe nge-burlap canvas. Isici esikhulu kunazo zonke ukuthi ihlala isikhathi eside. Imvelo yayo eguquguqukayo nayo iyathandwa ngabantu abaningi, futhi ingafaniswa nanoma yikuphi ukugqoka. Idizayini eyingqayizivele yesikhwama sendwangu, kanye nokuhlobisa okungaphandle kakhulu nekhwalithi yangaphakathi, sekuyimfashini yabantu abasha.
Inzuzo enkulu yezikhwama ze-canvas ukuthi zihlala isikhathi eside futhi amaphethini asesikhwameni ayakha. Izikhwama ze-Canvas kulula ukuzisebenzisa futhi zibukeka zizinhle kanti intengo ishibhile. Ngokuvamile, ungathenga eyodwa ngemali engaphezu kwamadola ayishumi, kepha uma uzoyithenga kunoma imiphi imikhiqizo edumile, nayo ibiza kakhulu. Ngemuva kwakho konke, amagama abo emikhiqizo abiza imali eningi. Isikhwama futhi siwuhlobo lwesikhwama esonga imali nesingabizi. Samukela ukwakheka kwakho, okusho ukuthi ungaba nezikhwama zakho ze-canvas ezinemali encane. Sicela uxhumane nathi!
Langaphambilini Isikhwama Sokuthenga se-Canvas
Olandelayo: Isikhwama se-Canvas Cotton Tote Esisebenzisekayo
Isikhwama Sokuthenga Esigoqekayo SeTote Grocery